‘रोमियो एन्ड मुना’ निस्सन्देह लभस्टोरी फिल्म (कस्तो छ कथा ? )
By vijayafm on	 July 28, 2018 मनोरञ्जन, विविध खबर
रोमियो एन्ड मुना । नाम खास्सा छ । दुई विख्यात प्रेमकथाका अलग-अलग दुई पात्र रोमियो एन्ड जुलियटका रोमियो र मुना-मदनकी मुनालाई समायोजन गरेर न्वारान गरिएको ‘रोमियो एन्ड मुना’ निस्सन्देह लभस्टोरी फिल्म हो ।
सुन्दा सामान्य र सजिलो जस्तो लागे पनि लभस्टोरी फिल्म बनाउनु, त्यसमा मन खोलेर लगानी गर्नु र सबैखाले दर्शकलाई टिकटको पंक्तिसम्म तान्नु पक्कै गाह्रो काम हो । यस्तै गाह्रो काममा हात हालेका छन्, विनय श्रेष्ठ र निर्देशक नरेश कुमार केसीले ।
त्यसो त लभस्टोरी फिल्मले बजेट त्यति विघ्न बजेट माग्दैन । तर, ‘रोमियो एन्ड मुना’को हकमा कुरो अलि फरक छ । खासगरी भिएफएक्स प्रविधिका यसमा खर्च गरिएको छ । अरू कुरा भने सामान्य नै छन्।
लभस्टोरी फिल्मलाई आवरणमा देखाइने तडकभडक र चमकदमकले त्यति वजनदार बनाउँदैन, जति संवेदनाको गहिराइले बनाउँछ । कथा, पात्र र प्रस्तुतिबाट संवेदनाको त्यो गहिराइमा पौडनु सामान्य होइन । यद्यपि फिल्मका नायक तथा निर्माता विनय र निर्देशक नरेशले हिम्मत गरेका छन् ।
अमेरिकामा हुर्केका वेदजंग (विनय श्रेष्ठ) प्लेब्वाई हुन्, जसलाई आमाले विवाह गरेर घरजाम गर्नका लागि नेपाल पठाएकी छिन् । नर्स प्रिया (सुरक्षा पन्त) उनको हुनेवाली पत्नी ।
वैंशालु उमेरका वेदजंग हुनेखानेका छोरो हुन् । उनी विन्दास मात्र छैनन् उद्दण्ड पनि छन् । राम्री युवतीमाथि कामुक दृष्टि बिच्छ्याउँछन् ।
धरानमा वेदजंगकी पूर्व गर्लफ्रेन्डसँग (सुष्मा कार्की) पनि छिन्, जोसँग वेदजंगले सम्बन्ध नवीकरण गरेका छन् । यता हुनेवाली पि्रयासँग कफी-गफ गरिरहेका वेदजंग पूर्व गर्लफ्रेन्डसँग रतिसुखमा रमाइरहेका छन् । यसैबीच वेदजंग ठोक्किन पुग्छिन्, मुनासँग (सृष्टि श्रेष्ठ) । मुना फाइन आर्टकी विद्यार्थी हुन् । पढाइ सँगसँगै वेटरको काम पनि गर्छिन् ।
वेदजंग र मुनाबीच केही समानता छ । उनीहरु दुवैले राम्रो अभिभावकत्व पाएका छैनन् । वेदजंग आमाको छत्रछायामा हुर्किए पनि उनको बुबासँग सम्बन्ध छैन । बुबा र आमाबीच सम्बन्ध विच्छेद भएको छ ।
यता मुनाकी आमा जंड्याहा बुबाको कुटाइबाट मारिएकी छिन् । बुबा जेलमा छन् ।
मुना र वेदजंगको प्रवृत्ति र व्यवहार भने ठिक उल्टो छ । मुना जिद्दी छिन् । वेदजंग उद्दण्ड । हुनेवाली पत्नी, कामुक गर्लफ्रेन्डसँगको दोस्ती र मस्तीबाट छुटेर गम्भीर, भावुक र जिद्दी युवतीसँग वेदजंगको सम्बन्ध कसरी गाँठो पर्छ ? २ घण्टा ४५ मिनेट लामो फिल्मले त्यही कथा भन्छ । online khabar